Shiinaha Ilaalinta Maalinlaha ah ee aan dawada lahayn UV Light wasakhda wajiga la saari karo iyo alaab-qeybiyeyaasha | RISIN
Ilaalinta Maalinlaha ah Maaskaro Maaddada UV-ka ah ee Wajiga la Tuuri Karo
Ilaalinta maalinlaha ah ee aan daawada lahayn ee UV nalka nadiifka ah ee wejiga la iskaga tuuri karo 10 kumbiyuutar bac kasta oo daboolan, heerka CE iyo FDA oo diiwaangashan, qaab dhismeedka 3 lakab (2 lakab oo dhar aan tolmo lahayn ah iyo 1 lakab oo ah BFE 95% maro dhalaalaya) ayaa ku filan ilaalinta boodhka, ifilada iwm, oo ku habboon in lagu iibiyo dukaanka tafaariiqda iyo dukaamada waaweyn.
Waxyaabaha: Maro aan tolmo lahayn + Meltblown filter filter + Maro tolmo leh
Cabir: 17.5 * 9.5 cm
Feature: La tuuro, ku habboon, boodhka aan caddayn, fayraska ka hortagga
Heerka: EN149-2001 + A1 2009 ， GB / T 32610-2016
Xirmo: 10 PCS / Bag, 2000 PCS / CTN
Qaab dhismeedka wax soo saarka ee maaskaro wajiga:
Maaskaro wajiga la tuuri karo waxay ka kooban tahay jirka maaskaro, maaskaro maaskaro iyo xarig macdan ah. Jirka maaskaro wuxuu ka samaysan yahay dhar aan tolmo lahayn iyo dhar dhalaal ah oo dhalaalaya. Qalabka birta ah waxaa laga sameeyay waxyaabo jilicsan.
Tilmaamayaasha Waxqabadka Ugu Muhiimsan:
Waxtarka sifeynta bakteeriyada waa inaysan ka yaraan 95%. Caabbinta hawo qaadashadu waa inaysan ka weynaan 49Pa / cm2. Wadarta tirada gumeysiyada gumeysigu waa ≤100CFU / g. Colka Escherichia, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, hemolytic streptococcus, fungus waa inaan la ogaan.
1. Kahor isticmaalka, hubi in baakaduhu ay xaalad wanaagsan yihiin oo xaqiiji taariikhda uu dhacayo badeecada.
2. Fur baakada, kala soo bax maaskaro, fidi oo ku soo jiido maaskaro wajiga gacmaha oo ka ilaali marinka macdan korkiisa iyo dhinaca laalaabka xagga hore; ku riix marinka macdanta ah biriijka sanka ilaa labada dhinac oo leh faro si aad ugu sameysid birta birta ah buundada sanka iyo wajiga wajiga.
Hore: DC Cable 1500V H1Z2Z2-K Fiilooyinka Solar 6mm2
Xiga: 125A 160A 250A 3 Pole AC MCCB Wareegta Wareegga Wareegga